Federal Government Mee Board na-elekọta onyinye Savings Fund
Isiokwu:Onyinye ihe Savings Fund
Site: Busayo January 4, 2012
-Esonụ na-adịbeghị anya mwepụ nke onyinye ihe si mmanụ ụgbọala, (PMS) ndị Federal Government nwere guzosie onyinye ihe Re-ulo oru mbo na ikike Program.
The osisi nke ga-gawa site Dr. Christopher Kolade ga-enwe ebumnobi nke-elekọta enweta ego na mmanụ ala onyinye ihe ịzọpụta akaụntụ na ihe omume -specifically ka mma ndụ nke Nigerians na akara na mgbanwe burukwa nke President Jonathan.
Ndị ọzọ so na osisi ga-agụnye lara ezumike nká Isi General Mamman Kantagora (osote onye nke osisi),nnọchiteanya abụọ nke National Assembly, nnọchiteanya abụọ nke haziri ahazi ọrụ, onye nnọchiteanya si National Union of Road Transport Ọrụ(NURTW),onye nnọchiteanya si Nigeria Union of Odeakụkọ, onye nnọchiteanya si n'ebe inyom otu, onye nnọchiteanya nke mba na-eto eto, onye nnọchiteanya nke obodo ọha nzukọ, Minister of National atụmatụ, Minister of Finance, Minister nke ala n'ihi na ahụ ike, Minister nke mmanụ ala ego, ndị pụrụ iche ndụmọdụ Mr. president on oru ihe na onye nnọchiteanya nke ọ bụla si isii geo-ndọrọ ndọrọ ọchịchị zones nke mba.
Ka ọ dịgodị, ọrụ n'otu na mmadụ ọzọ nri mmume nwere kwuru mkpesa na mberede mwepụ nke mmanụ ụgbọala onyinye ihe nke mere na price nke mmanụ ụgbọ ala ntọt si N65 na-N141- abawanyele nke 116%.
Ọ bụ ezie na ndị ahịa nke mmanụ ala ịdị iche iche site N138 ka N190 na mmanụ ụgbọ ala ụgbọ, na-adịbeghị anya ibugo onu na-aga n'ihu ebua Jeremaya mere nke ndakpọ olileanya na esemokwu nke mmasị n'ebe ndị ahụ na ụmụ amaala. Otú ọ dị, bụbu onyeisi Justice nke Nigeria- Ikpe ziri ezi Salihu Modibbo Alfa Belgore, a họpụtara na-edu mkparịta kọmitii izute na ọrụ n'otu na ndị ọzọ na ndị nketa oke iji ikwekọrịta on ọhụrụ a development.
-Akpa na-ekwu okwu on "Federal Government Mee Board na-elekọta onyinye Savings Fund"